Zvinonzwisisika: Imwe Lightweight, Cookieless Imwe nzira kuGoogle Analytics | Martech Zone
Vhiki rino ndakakwanisa kushandisa imwe nguva nevamwe vakuru vekutengesa kubva kuYunivhesiti yemuno uye vakabvunza hunyanzvi hwesimba hwavanogona kushandira kuti huve hunodiwa kune vashandirwi. Ndakanyatsokurukura Google Analytics… Kunyanya nekuti chishandiso chakaomarara chandinoona kuwanda kwemakambani anoita sarudzo dzakaipa. Kuregeredza mafirita, zviitiko, mishandirapamwe, zvinangwa, nezvimwe zvinopa dhata iro rinenge rinongogara richikutungamira munzira isiriyo.
Kuenda kwangu kunyevero ndeyekuti Google Analytics ndeye injini yemubvunzo, kwete iyo injini yekupindura. Pese paunodhonza chati uye uverenge iyo data ... iwe unofanirwa kunge uchibvunza zvauri kunyatso tarisa uye edza kufunga kuti nei zvichitaridzika nenzira yazvinoita.
Google Analytics zvakare inomiririra sezvo isingazivise vashanyi vakapinda muGoogle Akaundi. Izvi zvinogadzira mishumo sekutsvaga kwemazwi akakosha kwakatungamira mushanyi kune yako saiti isingabatsiri nekuti irikungokuratidza vashandisi vasingazivikanwe vasina kupinda ... izvo zvinowanzo kuve vashoma kwazvo.
Ehezve, ruzhinji rwevashandisi - kunge vakapinda muakaundi yeGoogle - vane data rakapfuma iro Google chete inogona kuona nekushandisa kushambadzira kwavo. Kune kambani inoti, Usave Akaipa… izvo zvakaipa. Izvo zvakati, Google Analytics inotonga indasitiri saka isu tese tinofanira kuve nyanzvi pakuishandisa.
Kuvanzika uye maKuki
Sevabhurawuza, zvirongwa zvema mail, uye nharembozha zvinomisa zvakavanzika zvavo… kugona kuverenga makuki echitatu-bato (semunhu akapinda muGoogle mushandisi) kuri kudzikira nekukurumidza. Izvi zviri kukanganisawo Google Analytics uye zvichave zvinonakidza kuona kuti kukura kwakakura kuri kufambira mberi. Kunyange Android uye Chrome zvakare iine mugove mukuru wemusika, hapana kupokana nekutonga kweIOS. Apple inoenderera nekuisa akawanda uye akawanda maturusi mumaoko evashandisi vayo kudzikisira kuteedzera.
Chinyorwa chinobatika chakareruka - 17 nguva diki pane iyo Google Analytics script, haishandise makuki kana kuteedzera chero data remunhu saka inowirirana zvakazara nemitemo yepachivande, uye ichiri kushandisa zvinhu zveUTM zvekubvunza kuitira kuti usazonetseke nekurasikirwa nekutevera pamishandirapamwe yauri kuita. Izvo zvinosanganisirawo otomatiki kuzivisa kuburikidza neemail kana iwe uchitsvaga mutengi-akatarisana nemhinduro.
Inonzwisisika inoteedzera mashoma madiki emetriki uye anovaisa pane iri nyore kunzwisisa dashibhodhi. Panzvimbo pekutsvaga yega metric ingafungidzirwe, mazhinji acho ausingazombowana chekushandisa, Zvinonzwisisika zvinotarisa pane akakosha stats webhusaiti chete.
Iko hakuna menyu yekufamba. Iko hakuna mamwe ekuwedzera-mamenu. Iko hakuna kudikanwa kwekugadzira tsika mishumo. Plausible inokupa iri nyore uye inobatsira webhu analytics dhibhodhi kunze kwebhokisi.
Zvinobatika zviri nyore kushandisa uye kunzwisisa pasina kudzidziswa kana ruzivo rwemberi. Zvese zvaunoda kuti uzive nezve yako webhusaiti traffic iri papeji rimwe chete:
Sarudza iyo nguva yenguva iyo iwe yaunoda kuongorora. Nhamba dzevashanyi dzinounzwa otomatiki paawa imwe chete, zuva nezuva kana pamwedzi girafu. Iyo default nguva furemu yakatarwa pamazuva makumi matatu apfuura.
Ona iyo nhamba yeasarudzika vashanyi, yakazara peji maonero, iyo bounce mwero uye yekushanya kwenguva. Aya metric anosanganisira muzana kuenzanisa neyakare nguva yenguva kuti iwe unzwisise kana iwo maitiro ari kukwira kumusoro kana pasi.
Pazasi chaipo pekuti iwe unoona ese epamusoro ekutumira masosi e traffic uye ese mapeji anonyanya kushanyirwa pane yako saiti. Bounce mitengo yeanotumirwa ega ega uye mapeji anosanganisirwa futi.
Pasi penzvimbo dzekuendesa uye nemapeji akashanyirwa zvakanyanya, iwe unoona runyorwa rwenyika traffic yako iri kubva. Iwe unogona zvakare kuona chishandiso, bhurawuza uye inoshandisa system vashanyi vako vari kushandisa.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, unogona kunyange kuteedzera zviitiko uye zvinangwa kuti uone huwandu hwevashanyi vakashandurwa, chiyero chekushandura, kuti unzwisise kuti ndiani ari kushandura uye nzvimbo dzekuendesa dzinotumira traffic inoshandura yakanakisa.
NePlausible, iwe unowana ese akakosha ewebhu analytics nekutarisa kuti iwe ugone kutarisa kugadzira saiti iri nani.
Kana zviri zvemakuki, iwe unogona zvakare kumisikidza proxy yekushandira iyo analytics script kubva domain yako name seyekutanga-bato kubatana uye uwane mamwe akajeka matanho. Zvakanakisa pane zvese, yako saiti data haife yakagovaniswa pamwe kana kutengeswa kune chero echitatu-mapato. Izvo hazvimbozoitirwa mari, kucherwa nekukohwewa wega uye maitiro maitiro.
Zvinobatika hazvisi zvemahara, asi ndizvo zvakachipa uye zvinoenderana nenhamba yemasaiti uye kutarisa peji iwe zvauri kuwana.
Kutanga Kwayedza Yemahara Wona A Riripo Demo
Tags: Analyticsanalytics mishandirapamweCookieless analyticsanalytics nyoreyekutanga-pati analyticsgoogle analyticsgoogle analytics imwe nziralightweight analyticszvinonzwisisikazvakavanzika zvinoenderana analyticsanalytics akarerukaUtm